थ्रीस्टार र झापाको सेमिफाइनल भिडन्त आज – Khel Dainik
थ्रीस्टार र झापाको सेमिफाइनल भिडन्त आज
जेष्ठ २, २०७५ | (PostaComment)
गाईघाट (खेलदैनिक) । पाँचौ रमपम उदयपुर गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलतर्फ आज दावेदार रुस्लान थ्रीस्टार क्लब र रमपम झापा–११ भिड्दै छन् ।
गाइघाटस्थित थरुहट उदयपुर रंगशालामा ४ बजेदेखि शुरु हुने आजको पहिलो सेमिफाइनल भिडन्त केही रोचक हुने देखिन्छ । घरेलु फुटबलमा केही समय यता खराब लयमा रहेको झापाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने क्रममा झापाले रुपन्देही–११ लाई पराजित गरेको थियो ।
उता सिजनको शुरुवात मै माइ भ्याली गोल्डकप जितेको थ्रीस्टारले दमक गोल्डकपमा भने शुरुवाती खेलमै पराजय बेहोर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । यद्यपि जारी प्रतियोगितातर्फ आफ्नो पहिलो खेलमा मोरङ–११ लाई हराएको थ्रीस्टारले आफ्नो दावेदारीतालाई भने कायम राखेको छ ।
आज हुने सेमिफाइनल भिडन्तमा दुवै टोलीले बिगतको नतिजा भूल्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अनुमान छ । त्यसैले पनि आजको पहिलो सेमिफाइनल भिडन्त रोमाञ्चक हुने स्थानीय दशकहरु बताउँछन् ।
कति होला त आजको नतिजा ? कुन टोलीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ ? के झापाले लय समाउँदै आज उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ला त ?
← तेस्रो टिभिएस अपाचे पोखरा स्पोर्टस् अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक रवाफिलो जितका साथ भरतपुर सेमिफाइनलमा →
एएफसी यु–२३ छनौट : नेपालको लगातार तेस्रो हार, कतार फाइनल चरणका लागि छनौट जेष्ठ २, २०७५
तेस्रो पाँचथर गोल्डकपको खेलतालिका सार्वजनिक (खेलतालिकासहित) जेष्ठ २, २०७५
नेपालगंज आइपुग्यो भिआइपी प्यारापिट, जडान कार्य पनि शुरु जेष्ठ २, २०७५
स्वदेश फर्कियो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली जेष्ठ २, २०७५
मकवानपुर गोल्डकप : थ्रीस्टार सेमिफाइनलमा जेष्ठ २, २०७५
एएफसी यु–२३ छनौट : अफगानिस्तान विरुद्ध भिड्ने नेपाली टोलीको घोषणा जेष्ठ २, २०७५